Showing १-१० of ३९५ items.
सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने
सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निस्कासन गर्ने भएको छ । इलाम नगरपालिकामा रहेको ९.६ मेगावाटको माथिल्लो माई जलविद्युत आयोजनाको विकासकर्ता सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावित, सर्वसाधारण, आफ्ना कर्मचारी र सामुहिक लगानी कोषसहितका लागि ५४ लाख ८८ हजार कित्ता आईपीओ निस्कासन गर्ने भएको हो ।कम्पनीको कुल पुँजी १ अर्ब १२ करोड छ । जसमध्ये स्थानीयका लागि ११ लाख २० हजार कित्ता र सर्वसाधारण, कर्मचारी तथा सामुहिक लगानी कोषका लागि ४३ लाख ६८ हजार कित्ता गरी कुल ५४ लाख ८८ हजार कित्ता आईपीओ खुला गर्ने तयारी गरेको हो ।आईपीओ निस्कासनका लागि कम्पनीले प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त ग
किन गर्दैछन् रुसी वैज्ञानिक प्रागऐतिहासिक अवशेषमा रहेका भाइरसको अध्ययन ?
रुसका वैज्ञानिकहरुले प्रागऐतिहासिक कालका जनावरका भाइरस निकाल्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जैविक पद्धतिबाट त्यस्ता पुराना भाइरस निकाल्न लागिएको हो । विगत केही वर्ष अघि रुसी वैज्ञानिकहरुले हिउँमा पुरिएको अवस्थामा त्यस्ता अवशेषहरु भेट्टाएका थिए । ती अवशेषहरुमा रहेका भाइरसहरुको अध्ययनमा रुसी वैज्ञानिक लागि परेको ‘द एमोसोभ नर्थ इस्टर्न फेडेरल युनिभर्सिटी’ ले तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । डेलीमेलका अनुसार रुसी वैज्ञानिकहरुले प्रागऐतिहासिक कालका कुकुर, घोडा, मुसा र अन्य जनावरका अवशेषको अनुसन्धान सुरु गर्दैछन् । सबैभन्दा पुरानो जनावरको अवशेष ५० हजार वर्ष पुरानो रहेको बताइएको छ ।रुसस्थित भेक्टर स्ट
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ६, २०७७
प्रेमिल साँझमा डुबे स्रष्टा दम्पतीहरू
१६ फेब्रुअरी, आसफोर्ड (यूके) करिब एक हप्ताअघि बेलायतको पूर्वी दक्षिणी भेगमा पर्ने केन्टमा भारी हिमपात भयो । कठ्याङ्ग्रिदो चिसोलाई जनजीवन प्रभावित पारिरहेको समयमा भने एक हूल स्रष्टाहरू भने आफ्नो जोडीसँग प्रेमिल मुद्रामा देखा परे ।	आइतबार प्रणय दिवसका दिन विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ, साउथ यूकेले प्रेम सिर्जना वाचन कार्यक्रममार्फत् आधा दर्जन बढी स्रष्टा दम्पतीहरूलाई उभ्यायो । सहसचिव एवम् कवि लाहाङ चेम्जोङले कार्यक्रम थालनी गरेलगत्तै सङ्गीतकर्मी थिर थापा मगरलाई डाके । करिब चार वर्ष यता टाढा रहेकी आफ्नी पत्नी टुगा थापालाई समर्पित गर्दै उनले रोमान्टिक गीत गाए । काठमाडौँबाटै भर्चुअल रूपमा जोडि
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ४, २०७७
ओस्लो / नर्वेको तटीय इलाकामा खराब मौसम र इन्जिनमा समस्या आएपछि अलपत्र परेको यात्रुबाहक पानीजहाजबाट एक हजार ३०० भन्दा बढी यात्रु र चालक दलका सदस्यहरुलाई सकुशल उद्धार गरिएको छ । पानीजहाजमा यात्रारत व्यक्तिहरुले शनिबार दिउँसो खिचेको भिडियोमा उक्त जहाज समुद्रमा ढलपल गरेको र मुस्किलले डुब्नबाट जोगिएको देखिएको थियो । नर्वेका उद्धारकर्मीहरुले तत्कालै हेलिकप्टर र अन्य जहाजको सहायताबाट उद्धारकार्य थालेका थिए । भाइकिङ स्काई कम्पनीको उक्त पानीजहाजमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । नर्वेको उत्तरी ट्रोम्सोबाट ओस्लोतर्फ आउँदै थियो । मोर ओग रोम्सडालबाट करिब दुई किलोमिटर अगाडि बढ्नासाथ इन्ज
प्रकाशित मितिः चैत्र ११, २०७५
महेश भट्टले यसरी त्यागे रक्सी, चुरोट
उ चुरोट, रक्सीको अमली addict भई सकेको थियो‘ उ चुरोट, रक्सीलाई छोड्ने प्रयास पनि गरिरहेको थियो‘ उसले आफ्ना गुरु सित पनि चुरोट, रक्सी छोड्ने तरिका सिकाउन भन्दै थियो तर उसको गुरुले उसलाई चुरोट, रक्सीलाई जबर्दस्ती छोड्नु हुन्न भनेर सम्झाएको थियो‘ ऊ आफ्ना गुरुलाई निकै सम्मान गथ्र्यो, त्यसैले उसले त्यो दिन देखि चुरोट, रक्सीलाई छोड्ने कुरा सोच्न पनि छाड्यो‘ एकदिन ऊ घरमा पुग्ने बित्तिकै उसकी ६ बर्ष कि प्यारी छोरी, बाबा-बाबा भन्दै उसलाई अंगालो हाल्न आएकी रैछिन‘ उसले पनि छोरीलाई अंगालोमा हाल्यो अनि म्वाई खान खोज्यो तर छोरीले चुरोटको दुर्गन्धका कारणले आफ्नो मुख अन्तै तिर फर्काइन्‘ यो घटनाले उसलाई आफ
बलिउडकी अभिनेत्री करीना कपूर खानले ३८औं जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । करीनाकी आमा गर्भवती हुँदा उनले अन्ना करेनीना पुस्तक पढेकी थिइन् । करीनाको जन्म भएपछि उनको नाम सोही पुस्तकबाट लिएर राखिएको हो । तर उनलाई घरमा मायाले बेबो नामले बोलाइन्छ । करीनाको जन्म सन् १९८० सेप्टेम्बर २१ मा भारतको मुम्बईमा भएको थियो । करीनाको जन्म एक फिल्मी पृष्ठभूमि भएको परिवारमा भएको थियो । उनका बुवा रणधिर कपूर र आमा बबिता एक जमानाका चर्चित कलाकार हुन ।
७४९ पटक पढिएको
मुम्बई/ नेपाली फिल्म क्षेत्रमा मात्र होइन विश्वको आकर्षणको केन्द्र बनेको बलिउड फिल्म नगरीमा पनि हिरोको तुलनामा हिरोइनलाई कम पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । यसो हुदाँहुँदै पनि बलिउडमा केही हिरोइन आफ्नो मिहिनेतले करोडपति बन्न सफल भएका छन् । दीपिका पादुकोण दीपिका अहिले बलिउडमा सबैभनदा बढी पारिश्रमिक लिने अभिनेत्री हुन् । छोटै समयमा बलिउडमा पहिचान बनाउन सफल उनी अहिलेकी हिट हिरोइन पनि हुन् । उनीसँग अहिले १० मिलियन डलर सम्पत्ति छ । प्रियंका चोपडा अहिले हलिउड प्रोजेट र बलिउडको पनि ठुलो प्रोजेटमा काम गरिरहेकी छन् प्रियंका । उनी अहिले बलिउडकी महँगी अभिनेत्री पनि हुन् । उनको सम्पत्ति ५५ करोड डलर रहेको छ
प्रकाशित मितिः आश्विन ४, २०७५
एजेन्सी/ पूर्व मिस वल्र्ड तथा बलिउड नायिका ऐश्वर्या राय बच्चन ४४ वर्ष पुगेकि छिन्। उनी १९९४ मा मिस वल्र्ड बनेपछि विश्वभरी चर्चित बन्न पुगेकी थिइन्। उनको सौन्दर्यता र नसालु आँखाको चर्चा अहिले पनि हुने गरेको छ। उनको पर्सनालिटीमा बढ्दो उमेरले कुनै प्रभाव पारेको छैन। १ नोभेम्बर १९७३ मा मंगलुरुमा जन्मिएकी ऐश्वर्या आर्किटेक्ट बन्न चाहन्थिन्। उनले यसका लागि एउटा इन्टिच्युटमा भर्ना पनि भएकी थिइन्। तर, मोडलिङले उनको करिअरमा अर्को मोड ल्यायो। आज उनी बलिउडको सफल अभिनेत्री, आफ्नो परिवारको निकै हेरविचार गर्ने हट एन्ड फिट आमाको रुपमा चिनिने गरेकी छिन्। दर्जनौ हिट फिल्ममा काम गरेकी ऐश्वर्याले २००७ मा अभिनेता
प्रकाशित मितिः भदौ २६, २०७५
[caption id="attachment_91900" align="alignnone" width="1100"] फायलफाेटाे[/caption] काठमाडौं/ बलिउड अभिनेताहरू दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको बिहेको चर्चा निकै लामो समयदेखि चलिआएको छ । समाचारहरूमा आएअनुसार, बिहे २० नोभेम्बरमा इटलीको लेक कोमोमा हुनेछ । बिहेका लागि तीन महिना बाँकी हुँदा दुवैजनाको परिवार सामान किन्न तथा अन्य तयारी गर्न व्यस्त छन् । बिहेभन्दा १० दिनअघि दीपिकाकी आमाले उजालाले ठूलो पूजा राखेकी छन् जसमा रणवीर र दीपिका दुवैले भाग लिनुपर्नेछ । यो पूजा दीपिकाको गृहनगर बेंगलुरुमा हुनेछ । नन्दी पूजामा उाजालाले एक मन्दिरका पुजारीसँग कुरा पनि गरेकी छन् । यो पूजा दुलाहा दुलहीका लागि अत्यन्त
प्रकाशित मितिः भदौ ८, २०७५
७६२ पटक पढिएको
बलिउड नायिका प्रियंका चोपडासँगको प्रेम र विवाहका विषयमा हलिउड सिंगर निक जोनसले पहिलोपटक मुख खोलेका छन् । उनले प्रियंकासँग आफ्नो ईंगेजमेन्ट भइसकेको स्वीकार गरे । हालै एक कार्यक्रममा प्रियंका र निक दुवै उपस्थित थिए । पत्रकारहरुले प्रियंकालाई निकसँगको सम्वन्धबारे लगातार प्रश्नको वर्षा गरेपछि प्रियंका आक्रोशित भइन्। ‘मेरो निजी जिन्दगीको कुरा तपाईंहरुलाई किन बताउने ? के म चुनाव लड्न लागिरहेकी हुँ र ?’ प्रियंकाले झोक्किदै भनिन् । त्यसपछि पत्रकारहरु निकतिर लागे । उनले भने शान्त भएर जवाफ दिए । पत्रकारले उनलाई सोझै ‘प्रियकासँगको ईंगेजमेन्टका लागि बधाई’ भनेका थिए । जवाफमा उनले धन्यवाद दिए । थप केही ब
प्रकाशित मितिः श्रावण २६, २०७५
७५२ पटक पढिएको